News - Mmụba nke ọnụ ahịa cobal agafeela ihe ndị a na-atụ anya ya ma nwee ike ịlaghachi larịị
Mmụba nke ọnụ ahịa cobal agafeela ihe ndị a tụrụ anya ya ma nwee ike ịlaghachi ọkwa nke ezi
N’ọnwa nke abụọ n’afọ 2020, ngụkọta mbubata akụrụngwa ruru tọn ton 16,800, mgbada otu afọ na 19%. N'ime ha, mkpokọta mbubata ọla bụ 0.01 tọn tọn ọla, nde 92% belata afọ; mkpokọta mbubata mmiri cobalt mmiri mmiri dị n'etiti ruru 15,800, mbelata otu afọ na 15%; Mkpokọta mbubata ụnyaahụ bụ 0.08 tọn tọn ọla, mmụba nke 57% afọ-afọ.
Mgbanwe na ọnụahịa nke ngwaahịa SMM cobalt site na May 8 ruo July 31, 2020
Data sitere na SMM
Mgbe afọ-June gasịrị, ruru ihe elektrọnal cobalt na cobalt sulfate ji nwayọọ nwayọọ ruo 1, ọkachasị n'ihi mgbake a na-eji nwayọọ nwayọọ na-achọ ihe batrị.
Atụmatụ ọnụahịa nke SMM cobalt sitere na Mee 8th ruo July 31st, 2020
Naanị ihe mere ịkwado ọnụahịa na-abawanye site na Mee ruo June nke afọ a bụ mmechi ọdụ ụgbọ mmiri South Africa na Eprel, na ngwongwo cobalt ụlọ siri ike site na May ruo June. Agbanyeghị, isi mmalite nke ngwaahịa ndị agbazere mmanụ n'ahịa ụlọ ka bụ nke karịrị akarị, sọlfọ amalitela imebi ala n'ọnwa ahụ, isi mmalite ndị ka mma. Ọchịchọ nke agbadata agbadatala nke ọma, ihe ndị chọrọ 3C elektrọniki 3C abanyela n'oge oge maka ịzụta, mmụba ọnụ ahịa adịwo obere.
Kemgbe etiti July - afọ a, ihe na-akwado mmụba ọnụ ahịa abawanyela:
1. Cobalt akụrụngwa ọkọnọ njedebe:
Oria oria ohuru a n’Afrika di nkpa, ma ekwuputala na ndi na-egwuputa nri abiawo n’otu n’otu. Ihe emetụtaghị mmepụta ihe maka oge a. Ọ bụ ezie na mgbochi na njikwa ọrịa a na-egwupụta ebe a na-egwu ala siri ike ma enwere ike ibute ọrịa na-agbasa nnukwu ntakịrị, ahịa ahụ ka na-eche.
Ka ọ dị ugbu a, ikike ọdụ ụgbọ mmiri South Africa nwere mmetụta kasị ukwuu. South Africa bụ mba kachasị nwee nsogbu na Africa ugbu a. Onu ogugu anabatabeghị 480,000, ọnụọgụ nke ọrịa ọhụụ mụbara site na 10,000 kwa ụbọchị. Aghọtara na kemgbe South Africa buliri ego mgbochi ahụ na Mee 1, ikike ọdụ ụgbọ mmiri agbadala ngwa ngwa, ma zigakwa usoro mbupu ụgbọ mmiri mbụ n'etiti ọnwa Mee; ikike ọdụ ụgbọ mmiri site na June ruo July bụ n'ụzọ bụ isi bụ 50-60% nke ikike nkịtị; dị ka nzaghachi si na ndị na-eweta cobalt akụrụngwa, N'ihi ụzọ ụgbọ njem ha pụrụ iche, usoro mbupu nke ndị na-ebubata ngwá ahịa bụ otu ihe ahụ dị ka oge gara aga, mana ọ nweghị ihe ịrịba ama nke mmezi. A na-atụ anya na ọnọdụ ahụ ga-aga n'ihu ma ọ dịkarịa ala ọnwa abụọ na atọ na-esote; usoro mbupu ụgbọ mmiri ụfọdụ nke ndị na-ebubata ngwaahịa na August na-adịbeghị anya emebiwo, na ngwongwo ndị ọzọ na ihe ndị na-adị ụrọ na-ejide obere ikike nke ọdụ ụgbọ mmiri South Africa.
N’ọnwa nke abụọ n’afọ 2020, ngụkọta mbubata akụrụngwa ruru tọn ton 16,800, mgbada otu afọ na 19%. N'ime ha, mkpokọta mbubata ọla bụ 0.01 tọn tọn ọla, nde 92% belata afọ; mkpokọta mbubata mmiri cobalt mmiri mmiri dị n'etiti ruru 15,800, mbelata otu afọ na 15%; Mkpokọta mbubata ụnyaahụ bụ 0.08 nde tọn ọla. Mmụba nke 57% afọ-na afọ.
Mpempe akwụkwọ China na-ebubata site na Jenụwarị 2019 rue Ọgọst 2020
Data sitere na SMM & Chinese Custom
Gọọmentị na ụlọ ọrụ Afrịka ga-emezi ngwa ahịa ndị ahịa ha nwere. Dabere na akụkọ banyere ahịa, site na Ọgọst afọ a, ọ ga-achịkwa ma na-achịkwa mkpụrụ akụ. Oge ndozi ahụ nwere ike ịbute mbubata ụfọdụ ngwaọrụ cobalt n'ime obere oge, na-eduga n'inweta nnweta. Agbanyeghị, iji mmanụ enweta kwa afọ, dị ka ọnụ ọgụgụ na-ezughị ezu si dị, ihe dị ka 6% -10% nke ngụkọta akụrụngwa zuru ụwa ọnụ, nke na-enweghị obere nsogbu.
Ya mere, akụrụngwa cobalt nke ụlọ na-aga n’ihu, ọ ga-aga n’ihu ma ọ dịkarịa ala ọnwa 2-3 n’ọdịnihu. Dabere na nyocha na ichebara echiche, ngwa ụlọ eji emepụta ihe dị ihe dị ka puku tọn puku iri bụ puku ton, ihe ndị eji eme ihe cobalt bụ ihe dị ka ọnwa 1-5.5, ihe nkịtị cobalt na-ejikwa nchịkọta ọnwa 2. Ọrịa a abawanyeala ọnụ ego zoro ezo nke ụlọ ọrụ na-egwupụta akụ na ụba, na-eme ka ndị na-ebubata akụrụngwa na-ajụ ịre ahịa, yana iwu ole na ole, ọnụ ahịa na-arị elu.
2. Smelted ngwaahịa ọkọnọ akụkụ:
Inweta cobalt sulfate dị ka ihe atụ, sọlfọ cobalt nke China erutela nke ọma n'etiti ọkọnọ na ihe a chọrọ na July, ọnụahịa ahịa cobalt dị ala nke ahịa ahụ kwadobere mmezi nke ndị na-eweta cobalt sulfate.
Site na July 2018 rue July 2020 E China Cobalt Sulfate Cumulative Balance
3. Akụkụ chọrọ
Igwe dijitalụ 3C batara n'ọnụ ọgụgụ nnweta na ịkwakọ ngwaahịa na ọkara nke abụọ nke afọ. Maka osisi nnu cobalt dị elu na ndị na-emepụta cobalt tetroxide, chọrọ ka na-akawanye mma. Agbanyeghị, a ghọtara na ngwa ihe eji emepụta cobalt nke dị na nnukwu ụlọ nrụpụta batrị bụ opekata mpe ruru 1500-2000, a ka nwere akụrụngwa na-abanye n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ kwa ọnwa. Ngwakọta akụrụngwa nke ndị na-emepụta lithium cobalt oxide na ụlọ ọrụ batrị dị elu karịa nke nnu cobalt dị elu na cobalt tetroxide. N’echebe anya, n’ezie, enwerekwa ntakịrị mgbagha maka ọbịbịa nke agịga kọmpụta na-esote Hong Kong.
Ihe a na-achọta ternary amalitela ịrị elu, yana atụmanya na-akawanye mma na ọkara nke abụọ nke afọ. N'iburu n'uche na ịzụta ihe ternary site na batrị nke ike batrị bụ ihe dị ogologo oge, ihe batrị dị ugbu a na ihe akụrụngwa akụrụngwa ka dị, ọ nweghịkwa mmụba dị ukwuu n'ọchịchọ ịzụta ihe akụrụngwa dị elu. Iwu nke ala na-agbadata naanị nwayọ, ọnụego ịrị elu na-arịwanye elu karịa nke ọnụahịa ngwa elu dị elu, yabụ ọnụ ahịa ka na-esi ike ịfefe.
4. Nnukwu ego maka nnukwu nnukwu ihe, ịzụta na nchekwa nchekwa
N'oge na-adịbeghị anya, usoro ụlọ macroeconomic anọgidewo na-akawanye mma, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ego ejiriwo mmụba dị ukwuu n'ahịa ahịa maka cobalt electrolytic. Agbanyeghị, ikike iji njedebe nke alloy dị elu, ihe ndọta, kemịkal na ụlọ ọrụ ndị ọzọ egosipụtaghị akara ọganiihu. Na mgbakwunye, asịrị ahịa na ịzụrụ na ịchekwa cobalt electrolytic enwewokwa mmụọ maka mmụba ọnụ ahịa okirikiri a, mana akụkọ azụmaahịa ahụ agbabeghị, nke a na-atụ anya na ọ ga-enwe obere nsogbu n'ahịa ahụ.
Na nchịkọta, n'ihi nsonaazụ nke okpueze ọhụrụ na 2020, ntinye na ọchịchọ ga-adịghị ike. Isi mmalite nke cobalt ụwa niile na-agbanwe agbanwe, mana ọnọdụ ọkọnọ na ọnọdụ chọrọ nwere ike ịbawanye nke ọma. A na-atụ anya inweta na akụrụngwa zuru ụwa ọnụ na ntanetị ruru puku ton 17,000.
N'akụkụ ndị na-eweta ya, a na-emechi ebe a na-agbanye ọla kọpa na-achagharị ọla kọpa nke Glencore. Ufodu oru ohuru ohuru eji akpo oku iji gha eme ihe n’aho n’ahia nwere ike ibighari n’aho ozo. Thenweta mmanụ a na-ejide n'aka ga-ebelata na obere oge. Yabụ, SMM gara n'ihu na-agbada amụma akụ na-enye ihe dị ala maka afọ a. 155,000 tọn ọla, 15-afọ na-agbada nke 6%. N’akụkụ ịchọrọ, SMM gbadara amụma amụma ya maka ụgbọ ala eletrik ọhụrụ, nchekwa dijitalụ na ike, na ọnụego ọla kọpa zuru ụwa belatara ruru tọn 138,000.
2018-2020 cobalt zuru ụwa ọnụ na nguzozi choro
Ọ bụ ezie na ihe a chọrọ maka 5G, ụlọ ọrụ ntanetị, ngwaahịa eletrọnik na-agbanwe, wdg abawanyela, ọchịchọ maka lithium cobalt oxide na ngwaọrụ ndị dị elu arịala elu, mana mmepụta na ire nke ọnụ ekwentị ekwentị na oke ahịa kachasị emetụta ọrịa ntiwapụ ahụ bụ. ele anya na aga n’ihu ịda mba, na-agbari akụkụ nke mmetụta na lithium cobalt oxide na mgbago elu n’ọchịchọ maka ihe eji arụ ọrụ. Yabụ, ekwenyeghị na ọnụahịa nke akụrụngwa dị elu ga-aba ụba nke ukwuu, nke nwere ike ibute igbu oge na atụmatụ ịkụda mgbada. Ya mere, si ele anya na onodu oku na ihe choro, onu ahia nke ihe cobal na nkera nke abuo n’onweghi oke, ma onu ahia nke ihe choro nwere ike gbanwe n’agbata nde 23-32 / ton.